လိပ်စွန် - ဝီကီပီးဒီးယား
တွားသွားသတ္တဝါ ပင်လယ်လိပ် မျိုးစိတ်တမ်းပလိတ်:SHORTDESC:တွားသွားသတ္တဝါ ပင်လယ်လိပ် မျိုးစိတ်
(အင်္ဂလိပ်: Hawksbill sea turtle)
လိပ်စွန် (Eretmochelys imbricata)
E. imbricata imbricata (လင်းနီးယပ်၊ ၁၇၆၆)
လိပ်စွန်များကို တွေ့ရှိရသည့် ဒေသများ
Testudo imbricata လင်းနီးယပ်၊ ၁၇၆၆
လိပ်စွန် (Hawksbill sea turtle) သည် ပင်လယ်လိပ်မျိုးဖြစ်ပြီး Cheloniidae မျိုးရင်းဝင်ဖြစ်သည်။ လိပ်စွန်ကို ပါဏဗေဒအလိုအရ “အိရက်မာရှယ်လေ အင်ဘရီခေတာ (Eretmochelys imbricata)” ဟု အမည်ပေးထားသည်။
လိပ်စွန်သည် Eretmochelys မျိုးစု၏ တစ်ခုတည်းသော ရှင်သန်ကျန်ရစ်သည့် မျိုးစိတ်လည်းဖြစ်သည်။ လိပ်စွန်မျိုးစိတ်တွင် အတ္တလန္တိတ်မျိုးစိတ်ခွဲ နှင့် အင်ဒို-ပစိဖိတ်မျိုးစိတ်ခွဲဟူ၍ မျိုးစိတ်ခွဲနှစ်မျိုးရှိပြီး ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးရှိ သမုဒ္ဒရာများနှင့် ကမ်းခြေဒေသများတွင် ကျင်လည်ကျက်စားကြသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် လိပ်စွန်များအား မျိုးသုဉ်းလုနီးပါးအန္တရာယ်ရှိ ပင်လယ်လိပ်မျိုးစိတ်အဖြစ် IUCN မှ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး အဆင့်သတ်မှတ်ထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း သစ်တောဦးစီးဌာန မှ “လုံးဝကာကွယ်ထားသော တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်” အဖြစ် သတ်မှတ်ပြဌာန်း၍ ဥပဒေဖြင့် ကာကွယ်ထားသည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လိပ်စွန်ရှိရာ ဒေသများ
ရိုက်ကူးထားသည့် လိပ်စွန် ဓာတ်ပုံများ
ဤဓာတ်ပုံတွင် လိပ်ခွံပေါ်ရှိ အထပ်ထပ်ဖြစ်နေသည့် အကြေးခွံသကဲ့သို့သောအရာများကို ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရသည်။
လိပ်စွန်၏ ထူးခြားသောနှုတ်သီးပုံစံအား အနီးကပ်တွေ့မြင်နိုင်သည်။
လိပ်စွန်၏ အလင်းရောင်ထွက်သော ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှ အရေးအကြောင်းများ
ဤ လိပ်အကြောင်း ဆောင်းပါးမှာ ဆောင်းပါးတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းဖြင့် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို ကူညီပါ။
↑ "Eretmochelys imbricata" (2008). IUCN Red List of Threatened Species 2008. IUCN. doi:10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T8005A12881238.en.
↑ CITES (ဇွန်လ ၂၀၁၂). "တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ၏ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်မှုအဆင့်အတန်းများ" (in မြန်မာဘာသာ) (PDF). CITES ကွန်ဗင်းရှင်း နှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစနစ်များ လက်စွဲစာစောင် (MOECA/ FD/ NWCD - CITES): စာ (၃၀ ~ ၃၆). သစ်တောဦးစီးဌာန.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လိပ်စွန်&oldid=710906" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၈:၁၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။